* 3 jeer ka yar ayuu saxaro dhigay muddo usbuuc ah.
* Saxaradiisu way adagtahay, qalalantahay wayna weyntahay
* Si dhib ah ayuu saxarada ku soo saaraa ama maba saxaroon karo.Hadii ilmahaagu ay dhibatada calool fadhigu ay haysay muddo ka badan 2 wiig, calool fadhigu wuu ku daba dheeraaday.
* Cuntada: ilmahaaga sii biyo ku filan iyo cunnada aan kor ku soo sheegnay oo u roon calool fadhiga.
* Tababar: Ilmahaaga ku tababar in uusan isku celin saxarada, uu markii uu u baahdaba uu kula socodsiiyo si aad u fahantid unala socotid waqtiyada ilmahaagu ubaahanyihiin in ay saxaroodaan.
* Daawada: waxaa jirta dhawr daawo oo loogu talagalay in ay caloosha socodsiiyaan, khiyaarka daawada waxaa xadidaya da'da ilmahaaga iyo calool fadhigooda heerka uu gaarsiisanyahay. dhakhtarkaaga kala tasho arrintaas.
* U mahad celi ilmahaaga: Ilmaha waxa ay jecel yihiin in la abaal mariyo ama wax ay ku farxaan loo sameeyo mar walba uu tuunjiga ku fadhiisto waqtigii loogu talagalay, si ay u tababartaan adigane waqti xadidan oo aad ku kontorooli kartid ilmahaaga aad u heshid, iskana ilaali in ilmahaaga aad nacnac iyo waxyaabaha macaan aad abaalgud ahaan u siisid.
Ummu Hafsa Och Hanan: